SIYAABAHA: QALABKA DAAWEYNTA IYO KA HORTAGGA: ISTICMAALKA XASAASIYADAHA, MAQAARKA WEJIGA IYO FAA'IIDOOYINKA CARRUURTA - SOOSAARKA DALAGGA
Taxanaha Herbta: guryaha dawooyinka
Dhammaanba waa la yaqaan tan taxane carruurnimada - waa geedo aad u faa'iido leh.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa ay leedahay dawooyinka iyo sida loo isticmaalo.
Taxanaha ayaa ah warshad cagaarsho ah oo ku sii kordheysa dhulkeena. Waxay ka tirsan tahay Astrov qoys, oo ka mid ah qoysaska ugu caansan ee botanical ee adduunka. Wuxuu jecel yahay qoyaan, sidaas awgeed sida caadiga ah wuxuu ku koraa balli ku dhow, beeraha iyo beeraha si fiican loo qaboojiyey, dhulka qoyan ee qoyan.
Warshadani waa sanadle, aan qabyo ahayn oo qiyaas weyn oo weyn. Heerkulka dhirta celcelis ahaan wuxuu gaaraa 70-80cm. Dhaqdhaqaaq waa mid bunni ah, dhuuban oo toosan, oo leh tiro badan oo laamo ah. Ubax ayaa lagu ururiyaa dambiilaha, dambiilayaasha waxaa lagu samayn karaa inflorescences badan oo adag.
Warshadani waxay leedahay heer aad u sarreeya. Waxa kale oo ku jira xaddi badan oo flavonoids, fitamiin C, provitamin A, saliidaha muhiimka ah, koontooyinka, qadhaadh iyo kuwa soo socda ee micro-iyo macronutrients - chromium, copper, iron iyo manganese.
Kalluunka (spulolist taxane) waa qaraabo ka mid ah taxanaha caadiga ah waxaana loo adeegsadaa naqshada muuqaalka.
Uruurinta iyo goosashada
Ubaxku wuxuu dhacaa muddada dabayaaqada Juun ilaa bilaha Luulyo iyo ilaa Sebtembar. Goynta waa in la sameeyaa marka dhirta ay leeyihiin buro, taas oo macnaheedu yahay June iyo July. Wixii banaan waxaad u baahan doontaa caleenta iyo dhalada dhirta (qiyaastii 15 cm xagga sare).
Waxaa ugu wanaagsan in la qalajiyo dhar si hab dabiici ah, isagoo saaraya lakab khafiif ah qol diiran oo qalalan. Dharku sidoo kale waa ku habboon yahay, laakiin si gooni gooni loo goosan karo caleemaha ma aha mid ku haboon in la qalajiyo sidan. Ka dib qalajinta, dhirta waxaa lagu keydin karaa baakad kasta - Bacaha wax lagu duubo bacaha balaastigga ah. Nolosha sheyga - 2 sano. Wakhti ahaan waa in la hubiyaa joogitaanka dulin, iyaga oo ka saaraaya haddii ay dhacaan. Sidoo kale, ha ku kaydi meel kulul oo qorrax leh, sida dhirtu u lumiso hantideeda faa'iido leh markay heerkulku soo gaadhay.
Taxanaha waxaa si gaar ah loogu koray ujeedooyin caafimaad. Waxaa loo tixgeliyaa qayb ka mid ah dhaqanka dhaqanka ee Ruushka, Tibet iyo Shiinaha.
Ha ku degdegin in laga takhaluso euphorbia, quinoa, ragweed, amaranth dib loo tuuro, dodder, qadhaadh qadhaadh beertii, sababtoo ah cayayaanka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn.
Noocyada noocan ah ee warshad ahaan awood u leh inay ka saarto geedi-socodka bararka, fal-celin xasaasiyadeed, si loo ogaado dhiigga. Intaa waxaa dheer, qadhaadh ee qayb ka mid ah dhirta u caadiga ah beerka, sababtoo ah waxaa badanaa la xiriirta cillad jirka ah ee maqaarka maqaarka iyo dermatitis soo baxaan. Sidaas darteed, qubeyska iyo cadaadiska ayaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo cuncunka xasaasiyadda, dermatitis, daaweynta geeddi-socodka bararka ee gubashada, dhecaanka, cudurka psoriasis iyo canbaarta. Sidaa daraadeed, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa decoction dhirta sida timaha biyo, sida qalab wax ku ool ah ee dagaalka ka dhanka ah dabacsanaan.
Waa muhiim! Xayawaanku waxay kaa caawin karaan cayayaanka iyo qaniinyada masaska. Si aad u nadiifiso goobta qaniinyada ah, xoqin caleemaha warshadda dhaqday, ku soo dar meeshii burburay oo xir. Fadlan ogow - dhirta oo kaliya ayaa nadiifiya nabarka, waxay yareysaa caabuqa, laakiin soo qaadashada sunta xooggan waxay u baahan tahay faragelin caafimaad!
Sida isticmaalka gudaha, taxanaha waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu yareeyo xanuunka iyo bararka gudaha gudaha cudurrada ku dhaca xubnaha iyo habka muruqyada: arthritis, arthrosis, rickets, gout. Manganese waxay leedahay saameyn ku leh dheef-shiid kiimikaadka, waxay samaysaa qaab-jajab iyo tinctures hab fiican oo loo kiciyo cunto-qabatinka iyo dedejinta dheef-shiid kiimikaad. Sidoo kale, warshadu waxay leedahay saameyn yar iyo saamaynta duriinka, saameyn wanaagsan oo ku saabsan shaqeynta beerka iyo sanbabada.
Warshadu waxay leedahay saameyn isku-dhafan oo la dejiyo, waxay kordhisaa xajmiga qandhada wadnaha, waxaa loo isticmaali karaa sida daaweynta guriga loo yaqaan 'homeopathic for hurricane'.
Tijaabooyinka khafiifka ah ee jidhka, tareenka ayaa faa'iido u leh carruurta da'doodu kala duwan tahay. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo barar iyo dermatitis ee dhaladka; waxay u fiicantahay isticmaalka joogtada ah ee loogu talagalay carruurta firfircoon ee da'da iskuulka iyo dugsiga sare, sida ay leedahay guryaha kansarka, waxay gacan ka geystaan ​​sameynta lafaha iyo xubnaha, waxayna yareyneysaa halista ODA. Waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa daaweyn wanaagsan oo loogu talagalay scrofula carruurta.
Isticmaalka ugu weyn ee daaweynta ee warshadani waa daaweynta dermatitis ee asalka kala duwan, daahirinta dhiigga. Waalidiinta kala duwan ayaa loo isticmaalaa, labadaba gudaha iyo dibadaba. Qodobada ugu muhiimsan ee isticmaalka warshadu waa, dabcan, daawada iyo qurxinta.
Wixii daaweynta cudurrada, dhirta waxaa loo isticmaalaa gudaha gudaha iyo dibedda. Tincture ugu ballaaran loo isticmaalay taxane - waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo tiro ka mid ah cudurada:
in laga saaro sunta iyo kolestaroolka dhiigga;
ee loogu talagalay daaweynta cudurrada;
dermatitis ee asal ka duwan (cudurka psoriasis, canbaarta, furunculosis, iwm.);
mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee xasaasiyad ka hortagga;
sida duriinka, diaphoretic;
si loo kiciyo rabitaanka cuntada.
Waa muhiim! Ku darida xarig ah qalalan ama decoction / tincture of warshad this to musqusha leedahay saamayn nasasho iyo saameyn deggan. Hase yeeshee, hypotonics waa in ay ka fogaato nooca nasashada: geedka ayaa hoos u dhigaya cadaadiska dhiigga.
Maya wax yar ayaa ah isticmaalka dhirta dabiiciga ah ee daaweynta:
ee cudurada lafaha iyo kala-goysyada;
inuu dhiigga nadiifiyo.
Daaweynta xasaasiyadeed ee loo isticmaalo mindhicirka, qubeyska, decoction, iyo sidoo kale taxane waxay u adeegi kartaa sida wax lagu daro shaaha. Gawaarida cusub, boogta cusub, gubashada, ama boogaha maqaarka, furka dhirta wax yar ayaa lagu dabooli karaa boogta si loo yareeyo caabuqa. Sidoo kale daaweyn wax ku ool ah ee daaweynta nabarrada furan - budada laga bilaabo laamood la jajabiyey, ubaxyo iyo caleemo. Qalalan iyo burburiyey on Booqday Furimaha Dagaalka, geedka waxaa si fudud ku shubay nabarka hoosta faashad.
Inkastoo xaqiiqda ah in shinni badeeco badanaa ay keento xasaasiyad, shinni beedka ayaa ka caawin doona dagaalka.
Wixii ujeedooyinka qurxinta, taxane badanaa waxaa loo isticmaalaa si loo hagaajiyo xaaladda timaha iyo maqaarka:
sida daaweyn loogu talogalay xannibaadda;
ka soo horjeeda timaha iyo qalalan;
si loo yareeyo bararka (finan, finan, cuncun);
marka qalajinta nabarrada iyo nabarrada (xagashada, gubashada, finanka, iwm)
Waa muhiim! Ka taxaddar isticmaalka dhirta kareemka jirka: taxanuhu wuxuu saameyn ku yeeshay jilicsan jaale iyo jilicsan, laga bilaabo dhirta xitaa soo saaro dheeha. Markaad ku maydho maraqa, timuhu waxay heli doonaan midab casaan leh, taas oo aan mar kasta la jecleysan. Isla sidaas oo kale ayaa lagu dabacsan yahay - meesha ayaa si ku meelgaar ah u noqon karta huruud, sidaas darteed waxa fiican in la isticmaalo kareemka ka hor wakhtiga jiifka.
Timaha adoo adeegsanaya decoction waxay kaa caawineysaa in laga takhaluso dhibaatooyinka dhakada.
Cumin, nasturtium, beeswax, bergamot, rosemary ayaa gacan ka geysan doonta xoojinta iyo soo celinta timaha burburay.
Si loo yareeyo geeddi-socodka bararka ee maqaarka, decoctions, tinctures, cadaadiska iyo qubeyska ayaa loo isticmaalaa. Marka la eego, cudurka psoriasis waxaa sidoo kale waxtar u leh in uu isticmaalo cadarka ka dib markii hore loo daaweyn lahaa maqaarka maqaarka leh tincture alkolada isla geedaha. Decoction wuxuu wejiga u jeedin karaa sida tonic, isaga oo ka saari kara iftiinka saliida leh iyo cidhiidhiga daloolada. Sidoo kale, qubaysku way fiicnaanayaan si ay u bogsadaan jeexjeexyada, hadhuudhka iyo dildilaaca cagaha.
Sababtoo ah maaddada sare ee isku xigta coumarin waxay leedahay saameyn macquul ah, taas oo micnaheedu yahay - waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga. Haddii aad leedahay caadi ama, gaar ahaan, cadaadiska dhiigga oo hoos u dhaca, isticmaalka dheeraadka ah ee dheeraadka ah ee dhirtaas wuxuu keeni karaa cawaaqib xun oo ah qaab daciifnimo, suuxdin, lulmo. Ha qaadin taxadar shakhsiyeed oo taxane ah, iyo sidoo kale in aad dhaafto qiyaasta la soo sheegay.
Saameynta daaweynta suuxinta ee qaabka yaraynta infakshanka, cuncunka iyo duufaanka leh noocyada kala duwan ee dermatitis waxay yeelan karaan qubays la leh xarig. Cuntadani waa:
Ku shub 1 koob oo ah dhirta qalalan iyo qallalan leh 2 litir oo biyo ah karkaraya.
Ha istaagaan ugu yaraan saacad. Waxaad kaydin kartaa ilaa 2 cisho, ka dib marka ay isku dhafka noqdaan wax aan faa'iido lahayn.
Cadaadiska ku shub musqusha.
Isticmaalka joogtada ah ee qubeyska oo leh xarig, koorso ah 15-20 hannaan, si weyn u yareeyaa muuqaalka cudurrada maqaarka. Laakiin habkani waa u wanaagsan yahay dadka waaweyn iyo carruurta ka weyn 12 sano.
Ma taqaanaa? Calaamadaha ayaa loo tixgeliyaa cawska, sababtoo ah waxay awood u leedahay in ay daadiyaan dhirta iyo dhaqamada kale, sidoo kale waa warshad malab wanaagsan oo quudisa xoolaha.
Carruurta, waxaad isticmaali kartaa habka soo socda:
Shub 1 tbsp. l jar jartey qallalan qalalan 500 ml biyo karkaraya.
Dabool dabool oo ku karkari boorso biyo.
Karkari muddo 15 daqiiqo ah oo ka baxsan kulaylka yar.
Ha soo jaro 30-40 daqiiqo. Cadaadiska.
Maraqku wuxuu ku shubaa qubeyska: marka lagu daro saamaynta faa'iido leh ee maqaarka sababtoo ah saliidaha lagama maarmaanka ah ee ka kooban, waxay carqaladeysaa cunuga, oo keena lulmo.
Saliid ka soo taxan
Caddaynta waxaa laga iibsan karaa farmashiyaha ama waxaad isu diyaarin kartaa. Cuntadani waa:
Qaado oo ah geedo la jarjarey ku shub 500 ml oo khudradda ah (saliid fiican) saliid.
Ku rid barkadda biyaha iyo kulul si tartiib ah 10-15 daqiiqo.
Waxaad isticmaali kartaa boomaato iyo sida cadaadis ah.
Maraq cabitaanka waxaa loo diyaariyaa sida ku qoran buuggan:
Shub 1 tbsp. l Wareeg (25 g) 1 tbsp. biyo karkaraya.
Karkari kuleylka hooseeya ilaa 10-15 daqiiqo.
Qaado cuntada kahor 2-3 jeer maalintii 0.5 koob.
Si loo yareeyo astaamaha arthritis-ka iyo osteoarthritis, waxaad isticmaali kartaa decoction-ka lagu suuxay meelaha isku-dhafan.
Iskudhicii adhiga ee kala-goysyada:
Qalalan qallalan (10 g) oo ku shub 250 ml oo biyo ah.
Marka xigta, ku dhaji warshadda qubeyska biyaha 30-40 daqiiqo.
Waa muhiim! HTani waxaa loo isticmaali karaa sida daaweynta degdegga ah si loo wanaajiyo xaalada maqaarka. Cuntadani waa mid fudud: isku dheelitirnaanta jaangooyooyinka jamacada leh jilci cusub ama qallalan qallalan. Si fiican u xajin fargeeto ama sheyga. U codso wejiga nadiifka ah, daboolo filim daa'in, adigoo u goynaya indhaha, afka iyo sanka. Ka tag maskarka 15-20 daqiiqo, ka dibna raaci biyo diirran. Maaskigu si dhakhso ah ayuu u yareeyaa caabuqa, adkeeyaa indhashareerka, wuxuuna saaraa dhalaalis madow, qoyaan iyo maqaarka maqaarka.
Cagaarshowga maqaarka, cambaarta, finanka, decoction waxaa loo diyaariyaa qayb yar oo ka duwan:
Qaado 3 tbsp. l noqo oo ku shub 2 koob oo biyo ah.
Isku kari kari ilaa iyo 10 daqiiqo.
Waa suurtogal in la isticmaalo maraq loogu talagalay cadaadiska, looska iyo sida fiilaha loogu talagalay qubeyska, iyo sidoo kale tan tonic ah maqaarka saliid leh. Laakiin ha iloobin in cawsku siinayo midab huruud ah.
Habka ugu wanaagsan ee lagu bogsiiyo waa inuu ku daro dhir udgoon leh shaahaaga caadiga ah. Waxaad kaloo soo shubi kartaa shaaha ka soo jeeda nadiif ah. Waxaad qaadan kartaa iyada oo aan qiyaasta adag. Xeerka ugu weyn - ku shub biyo karkaraya, ku adkeyso ugu yaraan 10 daqiiqo. Laakiin daaweynta xasaasiyadda, diathesis iyo scrofula, shaaha waxaa laga sameeyaa nadiif nadiif ah sida soo socota:
Shub 1 tbsp. l dhirta la jajabiyey oo leh galaas biyo ah.
Qabow oo u adeeg si qabow.
Walnuts iyo casiir cusub oo la jarjaray ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo scrofula.
Qiyaasta: Carruurta ka yar 12 sano - 1 tsp. 3-4 jeer maalintii. Dadka waaweyn - 1 tbsp. l 3-4 jeer maalintii. Fadlan ogsoonow in shaahku uu saameyn ku yeelan doono xasiloonida iyo duriinka waqti isku mid ah, kaas oo loo baahan yahay in la tixgeliyo kahor qaadashada.
Tincture waa mid ka mid ah derisyada ugu wax ku oolka badan, maadaama maadada ceeriin aysan ahayn kuleylka la daaweyn karo, sidaa daraadeed ma lumiso nafaqooyinka geeddi-socodka.
Recipe for saameynta guud sedative:
Qaado 50 g oo qalalan ama cusub oo tareen ah (2-3 qaado ah) isla markaana qashinka ku dar qado.
Duufaantii keentay waxay ku shubtay weel dhalada leh 500 ml oo ah 70% khamriga. Xiranjaraha si adag u xir.
Ku adkee 2 toddobaad meel meel diiran oo mugdi ah.
Furan oo cadaadis adoo adeegsanaya shaandhada ganaaxa, ka saarida harta dhirta.
Cun tincture tani waa inay noqdaan 20 dhibcood 3 jeer maalintii maalintii calool madhan. Waxaad ku dari kartaa biyo yar, waxaad ku shubi kartaa 1 tsp. sonkorta waa sidaas.
Ma taqaanaa? In kasta oo dhaleeceynta dawada dhaqanku, maanta in ka badan 30% dhakhaatiirta UK ayaa waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaan 'homeopathic medicine' inta lagu jiro daaweynta, iyo 70% dadka reer Brazil ayaa doorbidaya cunto nafaqo, daawo dhaqameed dhaqameed. Sidaa daraadeed, daaweynta dhirta dabiiciga ah waxay haysaa jagooyinkeeda waddamo leh heerar kala duwan ee nolosha, dharka bulshada iyo dhaqamada.
Soodhaweyn la'aanta khamriga ah ee loogu talagalay daaweynta cudurada lafaha, oo ay la socdaan soo saarista cusbada:
Shub 2 tbsp. l iyada oo xayndaab kale (20 g) oo leh galaas biyo ah - isticmaal foorno ama alaab la dhalaalayo.
Ku rid barkadda biyaha, daboolka iyo kuleylka, ma karkarin.
Ha illaa 30-40 daqiiqo.
Cadaadis oo ku luqluqo biyo la karkariyey 1: 1.
Noocan tincture ah ayaa la qaataa 3-4 jeer maalintii iyo 1 tbsp. l Waqtiga soo-dhoweynta ee ku saabsan qaadashada cuntada waa mid muhiim ah.
Qalabka waxtar leh oo si sahlan loo isticmaali karo, taxane warshad, ayaa gacan ka geysan kara xalka dhibaatada qurxinta iyo dhibaatooyinka caafimaad. Laakiin mid ka mid ah ma aha inay filanayaan saameyn mucjiso ah daroogo kasta: xusuusnow in calaamadaha iyo cudur kasta ay leeyihiin sabab - ujeedooyin caafimaad oo dhameystiran.